FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA JUG DOG - ALIKA
Alika Jack Russell Terrier / Pug mifangaro
Dollop the mix Jack Russell Terrier / Pug amin'ny 1½ taona— 'Dollop dia alika mahafinaritra, mpahay sambo. Toa miantehitra amin'ny lafiny Jack Russell izy satria mafy loha izy ary tsy lany hery mihitsy. Ny tiany dia ahitana ny maha-ivon'ny fiheveran'ny rehetra azy - na dia mila mitaky izany aza izy - ary izay hetsika mety hahatonga azy hahazo sakafo. Tena manao tsinontsinona manokana ny banga izy. '
Ny alika dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Jack Russell Terrier ary ny Pug .Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo fitambarana karazana toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Atsimo
Chloe the Jug amin'ny 2 taona— 'Be fitiavana izy ary lehibe miaraka amin'ny ankizy, saka ary alika hafa. Raisiny aorian'ny JRT ary angovo avo be sy marani-tsaina be izy. Ny siny dia tokony hanana fidirana amin'ny tokontany mimanda satria tia mihazakazaka sy mihady izy ireo. Hanenjika marokoroko sy bitro sns izy ireo ka tokony ho fefy ny tokontany. '
Bulldog amerikana 7 volana
'Noraisiko ny Ollie teo alohan'ny Krismasy. Izy dia Jack Russell / Pug afangaro ary tsy afaka nifaly tamin'ny toetran'ity hybrid ity aho. Manana te hahafanta-javatra be dia be izy ary milalao fiara, fa kosa liana amin'ny fotoana iarahana amin'i Neny. Ankafiziny koa ny fotoana miaraka amin'ilay alika hafa mifangaroharo Terra izay ny reniny dia purebred Golden Retriever ary mino raim-pianakaviana mainty izahay . Amin'ny raharahan'i Ollie dia mitaky zanak'ondry sy amn'alika izy ary tsy maintsy manome toky aho fa tsy misy manome azy henan-kisoa ao. Tiako ny mijery an'i Cesar Millan's Dog Whisperer ary naka torohevitra marobe avy amin'ilay fampisehoana momba ny maha-mpitarika entana ahy. Izaho dia mpanazatra alika niaraka tamin'ny programa 4-H tao amin'ny distrika teo an-toerana ary manodidina ny karazan-karazany rehetra nandritra ny taona maro dia talanjona ireo talen'ny Cesar. I Almà dia afaka manana fihetsika rehefa tsy mahazo izay tadiaviny izy rehefa maniry izany, ka tena mila mampiasa ilay anjara asa mavitrika mahery vaika miaraka aminy aho. Manana izy fiara avo lenta hijerena squirrels ary chipmunks ary hitraka mafy amin'izy ireo. Navelako tany ivelany teo amin'ny tokotanin-tseranana izy indraindray hanenjika azy ireo, HA HA. Heveriny fa mahafinaritra. Namolavola kilalao koa aho fa tena manana drive hilalao azy izy dia baolina plastika mafy, lehibe tsy tafiditra amin'ny valanoranony (izay mety ho matanjaka) ary misy vy roa vy ao anatiny ao. Navelako hanenjika azy eran'ny rihana voalohany amin'ny tranonay izy. Manakatona faritra fotsiny aho miaraka amina toerana maro mba hikatsoany. Izaho koa dia manana ny faritra filalaovana tena porofo tsara fa baolina. Raha tafahitsoka any ho any izy dia ho avy matetika haka ahy izy nefa tsy maintsy manara-maso na sofina ianao satria esoriny amin'izay zavatra akaiky azy ny fahasosorany. Tafiditra ao anatin'izany ny tady fanitarana, ny valin'ny varavarana fipetrahana na ny ottoman. Ny tsy fiovaovana amin'ny fitsipiky ny fitondran-tena tsara mandritra ny fotoana filalaovana dia mitazona ny trano tsy ho lasan'ity toetra kely ity. Ka amin'ny ankapobeny, ity karazany ity dia fifaliana misy. Izy no mpiara-miasa amiko tsy tapaka, tia ny saina avy amin'ny olona rehetra ary mazava ho azy mieritreritra fa izy no tsara indrindra. Tena raiki-pitia tamin'ny bika aman'endriny aho fa ny toetrany no tena naka ny foko. '
Stack of Jugs (Jack Russell Terrier / Pug mifangaro) - 'Otto any ambany dia 1/4 Jack Russell Terrier (ny reniny dia antsasaky ny antsasany), Phyllis eo afovoany dia 1/8 JRT ary ny zanak'izy ireo teo an-tampon'i Solo irery no tao amin'ny fako.'
'Benedict, Florence ary Nooner, alika kely Jug amin'ny 8 herinandro - ny ray aman-dreniny dia samy Jugs. Otto, ny rain'izy ireo dia 1/4 JRT ary Phyllis, ny reniny dia 1/8 JRT. '
ohatrinona ny vilanin-kisoa misy kibo?
'Nampianatra ny alikako aho handray tànana amin'ny Dog Whisperer. Vitany izany ary afaka mijoro sy mihodina boribory izy. Tiany ny ankizy sy ny biby hafa izay mbola tsy nandratra lalitra mihitsy. Tiany daholo. Zoey no anarany. Izy irery no Jug fotsy nivoaka tamin'ny fako. Tena tianay izy. '
'Ity i Bugsby. Efa-bolana ny sigara. Ny reniny dia Jack Russell Terrier ary Pug ny rainy. Ny vadiko nividy Bug ho ahy ho fanomezana Krismasy. Mahagaga sy marani-tsaina ny sigara, na izany aza dia mitaky fikarakarana sy fanatanjahan-tena be dia be izy. Rehefa tsy miasa isika dia mandeha Bugs kilometatra roa isan'andro . Rehefa miasa isika dia entintsika miaraka aminy ary mandeha aminy isika isaky ny miala sasatra. Tsy dia sarotra loatra ny namaky trano ... nitaky tsy fitoviana fotsiny. Nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy omaly, noho ny andiany alika kely farany ary ny haromotana voalohany ... milanja 9 pounds izao. Mety ho alika kely izy, saingy manana toe-tsaina alika be. Tsy matahotra na inona na inona izy. Ny mamy dia mamy tokoa. Tena be fitiavana izy, nefa mankafy koa amin'ny fikolokoloana. Manaikitra izy indraindray rehefa milalao ary manamboatra an'io izahay. Tsy tiany lazaina aminy hoe 'Tsia'. Tsy dia mivily matetika izy ... rehefa miahiahy fandrahonana izy na rehefa miteny azy hoe tsia. Rehefa miteny azy hoe tsia, dia mijery anao mangingina izy ary avy eo miondrika aminao hilaza ny fahasosorany. Tiako izy ary mahatalanjona izy. Tiany ny mandalo fitsangatsanganana any amin'ny trano fisakafoanana izay hilazan'ny olona azy fa mahafatifaty. '
Butters the Jug (Pug x Jack Russell Terrier mix) amin'ny 3 taona
Nugly ilay fangaro Jack Russell / Pug (Jug) - hoy ny tompony, 'Nugly no mpamorona azy rehefa te ho (Pug) izy. Na dia izany aza dia hyper hyper be izy (Jack Russell). Nahazo an'i Nugly aho fony izy 3 volana avy amin'ny fivarotana biby. Roa herinandro fotsiny no nanaovako azy ho vaky trano sy 3 herinandro nipetrahany, natory teo ambony baiko ary nanome ahy lamba. Tena manan-tsaina izy. '
yorkshire terrier sy shih tzu mifangaro
Maggie ilay alika kely mainty sy mainty hoditra amin'ny 7 volana— 'Nandehandeha lavitra izahay naka azy ary mendrika azy tokoa izy. Izy dia afaka mitsiriritra be ary manana ny fahaizan'ny Jack Russell Terrier. Tiany ny milalao ary nidera azy noho ny tsy fahaizany mandehandeha amin'ny olona. '
'Ity i Tootie the ATSIMO toy ny alika kely amin'ny 3 volana. Izy dia Jack Russel / Pug mifangaro. Faly be izy tao an-tranonay. Tootie dia tena marani-tsaina sy mahery. Fitiavana tamin'ny fahitana voalohany niaraka taminy sy ny zanako lahy (4 taona). Na aiza na aiza no itondrantsika azy dia sakanan'ny olona tsy eny an-dalana ara-bakiteny izahay satria CUTE be fotsiny. Indraindray izy dia mety ho saro-pantarina ary manandrana miala amin'ireo zavatra tsy tokony nataony. Mifanaraka tsara amin'ny zanako izy. tpt. Tianay tokoa i Tootie! '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Jug
Jug Sary 1
Jug Sary 2
mix shih tzu sy bichon frize
laboratoara sokola sy chesapeake bay retriever mifangaro
sheltie sy fifangaroan'ny retriever volamena
dalmatian mainty misy teboka fotsy
sarin'ny alika mpiandry ondry anglisy taloha